ခါးပတ် filter ကိုစာနယ်ဇင်း Dewatering ထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူ၊ ဖြန့်ဝေသူနှင့်စက်ရုံမှ ခါးပတ် filter ကိုစာနယ်ဇင်း Dewatering အကြောင်းသင်သိရန်လိုအပ်သည်။
ကျွန်တော်တို့သည်ထောက်ပံ့ရေး Export ကိုထုတ်လုပ် ခါးပတ် filter ကိုစာနယ်ဇင်း Dewatering သောအရည်အသွေးအကောင်းဆုံးပစ္စည်းနှင့်အတူထုတ်လုပ်သောသည်နှင့် client ကိုရဲ့သတ်မှတ်ချက်နှုန်းအဖြစ်ကမ်းလှမ်း Taiwan။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်ကုန်မျိုးစုံအထူ, အတိုအရှည်နှင့်အရွယ်အစားတွင် client နှုန်းတိကျသောလိုအပ်ချက်များအဖြစ် customized ကြသည်။ မြင့်မားဆုံးသို့အဆောက်အအုံများနှင့်အတူတပ်ဆင်ထားပြီးနှင့်အရည်အချင်းမြင့်မားမှုနှင့်အတွေ့အကြုံပရော်ဖက်ရှင်နယ်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ CHI SHUN MACHINERY PLANT CO., LTD. အများဆုံးတတ်နိုင်သောကုန်ကျစရိတ်မှာအရည်အသွေးအကောင်းဆုံးကိုကယ်နှုတ်ခြင်းငှါသီးများစွာသီးတတ်။
ပုံစံ - NBD-T
Triple Belt Skeleton Shade Filter စာနယ်ဇင်း
အရိုးစုဘောင်အမျိုးအစား roller ၏အစားထိုးအများကြီးပိုမိုလွယ်ကူပါစေ
ကြာကြာအထည်များဖြင့်ကြိတ်စက်များသည်ပိုမိုကြီးမားသော filter areaရိယာကိုသယ်ဆောင်ပြီးရေနည်းသောအနည်အနှစ်များကိုထုတ်လုပ်သည်
Triple Belt သည်အဆင့်နိမ့်သောအာရုံစူးစိုက်မှုအတွက်ဝတ်စုံကိုဒီဇိုင်းဆွဲသည်,ဖြုတ်တပ်လို့ရတယ်”V”ရွှံ့နွံမှအစိုဓာတ်ကိုအပိုလျှော့ချရန်ထွန်ထပ်တလဲလဲထယ်.
ရွှံ့နွံထွန်ပြီးနောက်,slurry အာရုံစူးစိုက်မှု5အတွက်ထိန်းသိမ်းရန်~8%နှင့်ရေဖျဉ်းရလဒ်ပိုကောင်းစေသည်.
999999999 http://schema.org/InStock USD 2020-12-31 https://www.sludgetreatment.com.tw/my/belt-filter-press-dewatering.html
အကောင်းဆုံး ခါးပတ် filter ကိုစာနယ်ဇင်း Dewatering ကိုရှာဖွေရန်နှင့် ၀ ယ်ရန်အတွက် ခါးပတ် filter ကိုစာနယ်ဇင်း Dewatering ကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူနှင့်ဖြန့်ဖြူးသူ ခါးပတ် filter ကိုစာနယ်ဇင်း Dewatering ကိုရှာဖွေရန်နှင့်ဝယ်ယူရန်အတွက်၊ Taiwan